११ वर्षपछि सूर्यमा ठूलो हलचल, पृथ्वीलाई खतरा ! – Sanchar Patrika
August 13, 2020 321
काठमाडौं । को रोना भा इरसका कारण अहिले संसारका धेरै देशहरु ल कडाउनमा छन् । तर वैज्ञानिक भाषामा भन्नुपर्दा संसारलाई उज्यालो बनाउने सूर्य विगत ११ वर्षदेखि नै ल कडाउनमा थियो । अन्ततः अहिले सूर्य ल कडाउनबाट बाहिर निस्किएको छ, अर्थात् सूर्य जागेको छ ।
सूर्यमा एउटा विशाल ध ब्बा अर्थात् सौर्य धब्बा देखा परेको छ । उक्त धब्बा यति ठूलो छ कि यसबाट निस्कने सौर्य ज्वालाले पृथ्वीलाई समेत नोक्सान पुराउन सक्दछ ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार सौर्यज्वाला अर्थात् सोलार फ्लेयर्सका कारण पृथ्वीको भूउपग्रह जडित सञ्चार व्यवस्थामा बाधा उत्पन्न हुने ख तरा छ । अर्थात् स्याटेलाइट कम्युनिकेसनमा असर पर्न सक्दछ । साथै नेभिगेसनमा समेत स मस्या आउन सक्ने र यसले हवाई तथा समुद्री यातायातमा असर पर्नसक्ने वैज्ञानिकहरुको अनुमान छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार हरेक ११ वर्षमा सूर्यको सतहमा ठूलो परिवर्तन हुने गर्दछ । पछिल्लो ११ वर्षदेखि सूर्य शान्त थियो, जहाँ अहिले हलचल चलिरहेको छ । जसका कारण सूर्यमा ठूलो धब्बा देखा परेको हो ।
उक्त विशाल सनस्पट हाम्रो पृथ्वीतर्फ घुमेको देखिएको छ । सोही कारण यसबाट निस्कने सौर्यज्वाला पृथ्वीलाई हा निकारक हुनसक्ने अनुमान गरिएको हो ।उक्त सनस्पटलाई ब्च्द्दठठण् नाम दिइएको छ । आगामी दिनमा यसको आकार अझै ठूलो हुन सक्दछ । स्पेस वेदर डटकमको रिपोर्ट अनुसार उक्त सनस्पटबाट स–साना ज्वालाहरु पहिलेदेखि नै निस्किरहेका छन् ।
पृथ्वीतर्फ घुम्दा नै ती सनस्पटले पृथ्वीको वायुमण्डलमा आयनीकरणको लहर पैदा गरेको भए तापनि अहिलेसम्म कुनै ठूलो घ टना भने भएको छैन । सनस्पटमा व्यापक चुम्बकीय शक्ति हुने हुनाले विशाल ऊर्जा पैदा हुन्छ र उक्त ऊर्जा सौर्य ज्वालाको रुपमा देखिन्छ । त्यसलाई को रोना मास इजेक्सन पनि भनिन्छ । सूर्यको सबैभन्दा विशाल धब्बाको व्यास ५० हजार किलोमिटरसम्म हुने गरेको छ । त्यसभित्र बाट सूर्यको तातो प्लाज्मा बाहिर निस्कन्छ र त्यसको वि स्फोटबाट सौर्यज्वाला पैदा हुन्छ ।
Prevभ्याक्सिनका विषयमा पुटिनको झुट ! निश्चित उमेर समूहबाहेक अरुलाई भ्याक्सिन दिन नमिल्ने
Nextसव’धान! कुखुराको मासुमा को’रोना भा’इरस